FAPBM : nirongatra ny fanimbana ala ny taona 2020 | NewsMada
Namoaka tatitra ny Fikambanana ho an’ny tontolo mananaina sy ny faritra aro­vana eto Madagasikara (FAPBM). Nirongatra ny fa­na­potehana tontolo iainana nandritra ny vanim-potoana Covid-19 tamin’ny taon-dasa. Araka ny fanadihadiana na­taon’ny oniversiten’i Hel­nsiki, nirongatra ny fandoroana ala tany amin’ny faritra arovana (AP) miisa 29 amin’ireo 123 nohadihadina, ny taona 2020, raha oharina ny taona 2019. Tena nanimba za­vamananaina maro tamin’izany ny enina amin’ireo.
Maro koa ny mpanao trafika sokatra tratra tany Atsimo Andrefan’ny Nosy, teo anelanelan’ny volana avrily hatramin’ny jolay 2020. Tany Ambanja, nahatratra 200 ha ny velarana ala honko ripaka, ny volana mey 2020. Nitombo izaitsizy ny fanaovana saribao sy ny fikapana fahatany hazo. Tafakatra 123 ny fatana fanaovana saribao hita tany avaratra andrefan’i Mada­ga­si­kara, any amin’ny faritra arovana Bon­golava, ny mey 2020, raha 53 ny desambra 2019.
Miisa 36 Faritra arovana tohanana
Mitentina 10 453 858 118 Ar (2 735 722 dolara) ny famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM, ho an’ny Rafitra misahana ny Faritra arovana eto Madagasikara (SAPM), amin’ity taona 2021 ity. Hoentina hampandehan-draharaha, hanatanterahana ny fampandrosoana eny ifotony sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho an’ny faritra arovana (AP) miisa 35 ity famatsiam-bola ity. Eo koa ny hanaovana vonjy taitra amin’ny tsindry mahazo ny AP. Hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny mpitantana ny AP vaovao. Manampy ireo ny fanatanterahana ny fandaharanasa fanonerana (Offset) any amin’ny AP iray, sy ny fanitarana ny Fari-dranomasina arovana (AMP) ao anatin’ilay tetikasa MPA-GEF 6, iarahana amin’ny Tahiry iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iainana sy ny AMP.